I-Motoblock | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokwenza okunamathiselwe kwe-motoblock ngokuzimela
I-motoblock iyadingeka epulazini futhi ifakwe amayunithi ahlukene ahlukene: umshini ungadla amazambane, ususe iqhwa noma uvune izinkuni ebusika. Ngesikhathi esifanayo, uhlu lwamayunithi axhunyiwe kumamodeli abizayo kunazo zonke ze-motor-block likhawulelwe ezinhlotsheni ezingu-2-3 zezici eziphakanyisiwe. Kulesi sihloko uzofunda ukuthi ungenza kanjani okunamathiselwe ku-tiller ngezandla zakhe nokuthi ungayisebenzisa kanjani.
Izici zokusebenzisa i-Salute 100 motor-block, izici zobuchwepheshe zedivayisi
I-Motoblock - iyunithi ebalulekile yepulazi elincane kanye ne-dacha. Ububanzi bokusetshenziswa kwalolu buchwepheshe bukhulu kakhulu, ikakhulukazi kusukela ukukhiqizwa kwamayunithi akumeli, kukhishwa amamodeli amasha futhi athuthukisiwe. Kulesi sihloko sizoxoxa nge-Salute 100 motoblock. I-Salyut 100: incazelo yedivaysi Isihlahla saseRussia se-OAO GMZ Agat esifundeni saseJaroslavl, lapho kuqhutshwa khona amabhulokhi eSaryut, kwaqala ukukhiqizwa kwalezi zingxenye ngo-2002.
Yiziphi izici ezinikezwe umgibeli we-Zubr JR-Q12E.
Isakhiwo esikhulu sikuvumela ukuba uqoqe izivuno ezimnandi, kodwa kunezimpikiswano zabo siqu. Bayahambisana nenqubo yokumba - kuyinkimbinkimbi kakhulu ukuyenza ngesandla, kanti futhi kungenangqondo ukushayela ugandaganda. Futhi lapha kuza ku-compact aid, kodwa ubuchwepheshe obukhiqizayo. Ake sibone ukuthi ummeleli walesi sigaba uyabonakala yini - i-diesel tiller yegama elidumile elithi "Bison".
Izici zedivaysi, ukusetshenziswa nokulungiswa kwe-motorcycle block ye-Kaskad
"Ukusetshenziswa kwamashini amancane" ebusweni be-motoblock kubalulekile kubanikazi bediza ezinkulu. Kunezinhlobo eziningi namamodeli emakethe ehluke kumklamo wabo - ngisho nezinyunithi ezibukeka ngokufanayo zingadinga izingxenye ezihlukene zokupakisha zokulungiswa. Ngako-ke, bantfu labanyenti batfola imikhiqizo yasekhaya, letimnandzi, imininingwane yabo ngebuningi.